भ्रमण समय छोट्याएर प्रचण्ड किन गए भारत ? — Sanchar Kendra
१रामकुमारी झाँक्री फेरि भाइरल, श्रीमान् बने कारण
२घाँटी का’टिएको अवस्थामा शव फेला
३नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भोलि नेपाल आईपुग्ने
४भारतीय सेनाको ३९ सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै
५फेरी बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन यति धेरै जनाको मृत्यु, देशभर तरंग
६आज पनि सर्वजनिक विदा
७एकाबिहानै मान्बु केन्द्र भएर भूकम्प
८आज २०७८ असोज ३१ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
९आजदेखि टी-ट्वान्टी विश्वकप, उद्घाटनमा दुई खेल हुँदै
१०आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइदै
११अधुरै रह्यो साफ च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको सपना, भारत आठौं पटक च्याम्पियन
१२एक मिनेटको अन्तरमा भारतले दुई गोल गर्यो
भ्रमण समय छोट्याएर प्रचण्ड किन गए भारत ?
नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समय छोट्याएर तीन दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साथै भारतका उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले आफ्नो भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको मोदीको लगातारको नेपाल भ्रमणका भएका सहमति कार्यान्वयनको सुदृढ वातावरण बनाउनु भएको बताएका छन् ।
विकासको एजेण्डा र पहिले भएका सहमति र समझदारी, भारत सरकारले गरेका थुप्रै प्रतिवद्धताहरुलाई स्मरण गराउने विचार गरेको प्रचण्डले भारत उड्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग भने । ‘चाहे संसदमा भारतका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा भनिएका हुन्, चाहे भूकम्पको सन्दर्भमा नेपालमा गर्ने सहयोग होस्, यी सबै विषय स्मरण गराउनेछु’, प्रचण्डले भने ।
पछिल्लो पटक दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएका सहमति कार्यान्वयनबारे पनि कुराकानी गर्ने उनले बताए ।
दाहालले भारत भ्रमण सकेर फर्केको केही दिनमै चीन जाने तयारी रहेका छन् । तर, त्यो भन्दा अघि पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिइने छ । प्रचण्ड भारतबाट फर्कने बित्तिकै नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा सक्रिय हुनेछन् ।
‘प्रचण्ड कुन एंगलबाट माओवादी हुन् ?’
कांग्रेस नेताको घाँटी रे’टेर ह’त्या, अभियोगमा यी आफन्तलाई लगियो नियन्त्रणमा
दशैँको मुखमा अर्को दुखद खबर, वालिङ जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या ३ पुग्यो
साफ च्याम्पियनसिप- भारतसँग नेपाल पराजित
साफ फुटबलमा आज नेपाल र भारत आमनेसामने हुँदै